क्षितिजको किराना पसल-२ युटुबमा सार्वजनिक|| जान्छु बिदेस नभन पियार - Namasteholland, News, Information and Technology
क्षितिजको किराना पसल-२ युटुबमा सार्वजनिक|| जान्छु बिदेस नभन पियार
२७ चैत्र २०७५, बुधबार १८:२२0102
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारी नेपालीका लागि बाध्यता र अवसर दुबै हो। यो विषयमा बहस हुन थालेको धेरै भइसकेको छ र लामो समयसम्म रहिरहनेछ भन्नेमा दुई मत नरहला। नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा भू–राजनीतिक प्रभावका कारण पनि यो विषय कहिलेसम्म हाम्रो अनिवार्यताको सूचीमा रहला यकिन भन्नसक्ने अवस्था छैन।
तर, हाल वेदेशिक रोजगारी भन्दा नेपालमै पसिना बगाए पनि धेरै उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सरकार तथा व्यक्तिगत रुपमा पनि पहल भइरहेको छ। सरकारी तबरबाट यस सन्दर्भमा नीति बन्ने तथा काम हुन थालेको संकेत देखिएको छ। यसका लागि कला क्षेत्रका सर्जकहरुले पनि आ–आफ्नो स्थानबाट सकारात्मक सन्देश दिने खालका प्रयासहरु भइरहेका छन्।
यहि सन्देशलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालमै गर्न सकिन्छ, यहिँ नै सम्भव छ भन्ने मुल मर्ममा एक गीत बजारमा आएको छ। गायक तथा संगीतकार क्षितिज सापकोटाले ‘किराना पसल–२’ नाम दिएर सो गीत बजारमा ल्याएका हुन्। विदेशिन लागेको श्रीमान्लाई नेपालमै गर्न सकिन्छ भन्ने श्रीमतीको आग्रह समेटिएको गीतमा केही नभए किराना पसल थापेर भएपनि गुजारा चल्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ। आफ्नै माटो र परिवार सँधै प्यारो हुन्छ भन्ने सन्देश दिइएको गीत कसरी लेखियो त?
गीतका सर्जक सापकोटा भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारी नेपालका लागि सामान्य भइसकेको छ, तर यसको प्रभाव र असर हाम्रा लागि पक्कै सामान्य छैन। पटक–पटक सुनिने विभिन्न दुर्घटनाका घटना र दैनिकजसो विमानस्थलमा भित्रिने नेपालीको शवको दृश्यले नै गीत लेख्न प्रेरणा दियो।’ पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका कारण योग्य श्रमशक्ति विदेशमा र नेपालमा भने बालबालिका तथा वृद्धहरु मात्रै रहनुपर्ने स्थिति छ। गाउँघरमा भएको खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु त छँदैछ, खुलेका उद्योगधन्दामा समेत छिमेकी मुलुकबाट कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको कतिपय उद्योगीव्यवसायीहरु बताउँछन्।
देश संघीयतामा गइसकेपछि काम गर्न सजिलो हुनेमा विश्वस्त सापकोटा सुरुमा पैसा कमाउन विदेश नै जानुपर्ने सोचमा परिवर्तन आउनुपर्ने तर्क गर्छन्। सापकोटा पछिल्लो केही वर्षदेखि अष्ट्रेलियामा बस्छन्। आफू देश बाहिर रहने अनि अरुलाई विदेश नआउनु भनेर आग्रह गर्न मिल्छ? सापकोटा भन्छन्, ‘सुरुमा त म लामो समय यतै रहने सोचमा आएको होइन, त्यसमाथि प्रत्येक वर्ष नेपाल आउने जाने गर्छु। गीतसंगीतमा काम पनि गरिरहेको छु। विदेशमा कमाएको रकम केही आयोजनामा लगानीसमेत गरिएको छ। यसले केही रोजगारीको अवसरसमेत प्रदान गरेको छ। मैले जस्तो गीत तयार गरें त्यो आग्रह स्वयम् मेरा लागि पनि हो।’
गायिका अन्जु पन्तको सुमुधुर आवाज रहेको गीतमा सरल र सरस शब्द संयोजन गरिएको छ। गीतको अर्को बलियो पक्ष यसको संगीत तथा संगीत संयोजन पनि हो। ‘एकातर्फ सकारात्मक सन्देश बोकेको गीत, त्यसमाथि श्रोता तथा दर्शकले रुचाइदिनुहुन्छ भन्नेमा आशा लागेको प्रोजेक्ट पनि हो’, गीतका संगीतकार दीपकराज विश्वकर्मा भन्छन्, ‘यो हामी सबैको कथा हो, यसकारण पनि आफ्नै कथालाई संगीतमा ढाल्दा मौलिकपनमा ध्यान दिएको छु।’
गीतको संगीत संयोजन नरेन्द्र वियोगीले गरेका छन्। रविन्द्र बरालले निर्देशन गरेको गीतको भिडियोमा स्वयम् सापकोटासँगै आशा खड्का र प्रेम श्रेष्ठ देखिएका छन्। गीत युट्युबमा ‘फोर बी इन्टरटेनमेन्ट’ च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको छ। सापकोटाका यसअघि किराना पसल–१, यो दसैं र तिहारैमा, नसोध कोही, माखे सांग्लोलगायतका आधा दर्जन बढी गीत सार्वजनिक भइसकेका छन्।
७ माघ २०७५, सोमबार १८:५०038
१३ असार २०७६, शुक्रबार ११:५१045
५ भाद्र २०७५, मंगलवार ०९:०५068
Hey Buddy!, I found this information for you: "क्षितिजको किराना पसल-२ युटुबमा सार्वजनिक|| जान्छु बिदेस नभन पियार". Here is the website link: https://www.namasteholland.com/%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%9c%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%a3%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%b8%e0%a4%b2-%e0%a5%a8-%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%9f/. Thank you.